Daynta cashuurta qoysaska shaqeeya | Washington Department of Revenue
Daynta cashuurta qoysaska shaqeeya
Waxaanu soo gelin doonaa bogan marka aanu hirgelinayno barnaamijkan. Isku duwaan geli inaad hesho wargelinta iimeel ama SMS/fariimo qoraal ah oo ku saabsan barnaamijka Daynta Cashuurta Qoysaska Shaqeeya.
Laha bilaabo 2023, barnaamijka Daynta Cashuurta Qoysaska Shaqeeya (Working Families Tax Credit, WFTC) waxa uu siiyaa lacag u dhaxaysa $300 ilaa $1,200 shakhsiga dakhliga hoose ama dhexe si ay u buuxiyaan shuruudaha u qalanka qaar.
Yaa u qalma?
Si aad ugu qalanto dayntan, waa inaad buuxisaa dhamaan kuwa soo socda sanadka aad dalbanayso daynta:
Waxaad adigu (iyo xaaskaagu, hadii aad wada xaraynaysaan) aad xaraysay cashuur celinta.
Buuxiso shuruudaha Daynta Dakhliga Kusoo Geley ee federalka (Earned Income Tax Credit, EITC), AMA inaad buuxiso shuruudaha EITC, laakiin aad ku buuxinayso Lambarka Aqoonsiga Cashuur Bixiyaha Shakhsiga ah (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN).
Waa inaad ahaataa ugu yaraan 25 jir oo aad ka yar tahay 65 jir AMA aad haysataa ilme u qalma.
Degan tahay Washington wax ka badan 183 maalmood.
Waa maxay xadiga dayntu?
Xadiga dayntu wuu kala duwan yahay oo waxa uu ku xidhan yahay tirada caruurta u qalanta iyo heerka dakhliga.
Xadiga ugu badan ee dayntu waxay u dhaxaysaa $300 ilaa $1,200 taas oo ku xidhan tirada caruurta u qalanta (eeg shaxda hoose). Xadiyadan kadibna waxaa loo yareeyaa iyada oo ku salaysan macluumaadka dakhliga, si lamid ah barnaamijka federalka. Daynta ugu yar waxaa weeye $50, iyada oo aan la eegeynin tirada caruurta u qalanta.
Tirada caruurta u qalanta
Xadiga daynta ugu badan
3 ama waxka badan
Sidee loo dalbanayaa?
Laga bilaabo 2023, shakhsiyaadka u qalma waxay ka dalban doonaan Waaxda Dakhliga.
Waxa aanu wakhti xaadirkan qabanaysaa dhawr madalood oo dhagaysi ah Noofember. Waxbadan ka oggow oo isku duwaan geli ka qayb galka.
Madasha dhagaysigu waxay anaka noo tahay meel aanu (DOR) ku dhagaysano fikirkiina u qalanka, xaqiijinta aqoonsiga, nidaamka arjiga, iyo adeega macaamiisha. Waxa aanu soo dhawaynaa fursadaha aanu kula kulmayno adiga ama hay'adaada madalaha dhagaysiga. Fadlan iimeel u dirDORWFTC@dor.wa.gov si aad u qabsato balan.
Si loogu soo casuumo cid khudbad jeedisa oo adiga ama hay'adaada usoo bandhigta fadlan booqo bogeena dalabka khudbadeeyaha.
Macluumaad dheeraad ah ka oggow nidaamka sharci dejinta DOR adiga oo booqanaya su'aalaha badanaa la iska waydiiyo (FAQ) sharci dejinta.
Gudida La Talinta Wacyi Gelinta Bulshada
Si loo xaqiijiyo in barnaamijka loo siman yahay oo baahida macaamiisha loo buuxiyo, waxa aanu qorshaynaynaa Gudida Latalinta Wacyi Gelinta Bulshada si ay nooga caawiso sheegitaanka iyo tilmaamaha dhaqangelinta ee khidad wacyi gelineed oo wanaagsan. Macluumaad dheeraad ah ayaa lasoo dhigi doonaa marka uu soo baxo.
Ka qayb gal madasha dhagaysiga
Dalbo khudbad jeediye
Isqor liiska fariimaha/boosta